को हुन, नन्दबहादुर पुन-उपराष्ट्रपति ? एक्सक्लूसिव | सप्तरी जागरण
को हुन, नन्दबहादुर पुन-उपराष्ट्रपति ? एक्सक्लूसिव
चुंगबान मीटिंगमा बादलको साथमा नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’।
बैद्यनाथ यादव/ संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको दोस्रो उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन विजयी भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट एमाओवादीका उम्मेदवार पुनले ३२५ मत पाएका छन् भने कांग्रेसका अमियकुमार यादवले २१२ पाएका छ,१० मत बदर भएको छ । शनिबार साँझ बसेको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तिले पुन विजयी भएको घोषणा गरिन् । शनिबार भएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा ५ सय ४७ मत खसेको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा शनिबार बिहान ११ बजेदेखि भएको मतदानमा मधेसी दल अनुपस्थित रहे । ५ सय ९६ जना सांसद्मध्ये ४७ जना अनुपस्थित रहे । सभामुख ओनसरी घर्ति र उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव तटस्थ बसे ।
छोरा बुहारीहरु : जितेन्द्र पुन-जुनमाया घर्ती र दिपेश पुन-सविना आले
नति : न्यूटन पुन
जन्म र परिवार :-
शिक्षा दिक्षा :-
प्रारम्भिक विद्यार्थी राजनीति :-
२०३७ सालमा निमावि राङ्सीमा कक्षा ७ मा पढ्दा उहाँ अनेरास्ववियू छैटौंको ईकाई अध्यक्ष हुनुभयो । त्यहींबाट दोस्रो जिल्ला सम्मेलनको प्रतिनिधि भएर जानुभयो । प्रहरीले अवरोध गरेपछि दिनभर ओढारमा लुकेर फर्कनुभयो ।
लिबाङमा पढ्दा शिक्षक कृष्णबहादुर महराको प्रभावले राजनीतिमा सक्रिय हुन थप प्रेरित ग¥यो । महराको सरल स्वभाव र पढाउने शैलीले उहाँलाई आकर्षित ग¥यो । संगठन बनाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न पनि महराले प्रेरित गर्नुभयो ।
शिक्षण र खेलकुद :-
टाउकाको मुल्य र पाखुरामा गोली :-
राज्यविरुद्धमा लागेको आरोपमा प्रशासनले उहाँको टाउकाको मूल्य जनयुद्ध अगाडि नै तोक्यो । मूल्य थियो ३५ हजार । ‘जहाँ भेट्यो त्यहीं मार्न’ भनेर प्रशासनले प्रहरी परिचालन ग¥यो । नेकपा (माओवादी) माओवादी नबन्दैको पार्टीको पहिलो रोल्पा जिल्ला सदस्य भएपछि प्रशासनले बढी टार्गेट ग¥यो । २०५१ को स्थानीय चुनावका बेलामा फक्रेर १५ दिन हिरासतमा राख्यो ।
०५१ मै मद्यावधी चुनावको बेला राज्य उहाँलाई मार्ने योजनामा पुग्यो । २०५१ मंसिर ९ गते गाउँको स्थानीय मेलामा (ईरिबाङको चप्का)मा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्यो । लठ्ठी चलाउन माहिर पासाङले प्रहरीलाई लठ्ठीले ढालेर भाग्दै गर्दा गोली चलायो । उहाँको पाखुरामा गोली लाग्यो । तर बाँच्न सफल हुनुभयो । त्यसपछि प्रहरीबाट मेलामै लोकबहादुर घर्ती र मनबहादुर पुन मारिए ।
पार्टी राजनीति :-
एकताकेन्द्र बने लगतै भएको रोल्पाको प्रथम जिल्ला सम्मेलनबाट जिल्ला सदस्यमा चयन हुनुभयो । कृष्णबहादुर महरा सेक्रेटरी रहनुभएको पाँच सदस्यीय जिल्ला समितिमा पासाङ, सन्तोष बुढा, इन्द्रबहादुर बुढा र जोखबहादुर महरा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । जनयुद्धको तयारी गर्दा वाईसिएलको रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष र सैन्य प्रशिक्षक हुनुभएका पासाङ १ फागुन ०५२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरुवात गर्दा देशका चार ठाउँमा गरेको आक्रमणमध्ये रोल्पाको होलेरीस्थिति इलाका प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गर्दा उत्तरपश्चिम र दक्षिण कमाण्डका लडाकु दलको इन्चार्ज र आक्रमणकोसह कमाण्डर हुनुभयो ।
सैन्य यात्रा :-
माओवादीले विभिन्न ०५३ मा दलहरुलाई स्क्वायडमा रुपान्तरण ग¥यो, तीनवटा स्क्वायड कमाण्ड उहाँले नै गर्नुभयो । २०५५ मा टास्कफोर्स बनायो । त्यसको कमाण्डर पनि उहाँ नै हुनुभयो । २०५६ मा प्लाटुनहरुलाई समेटेर कम्पनी बन्यो, त्यसको कमाण्डर उहाँनै हुनुभयो । सरकारसँगको पहिलो वार्ता असफल हुन लागेपछि ०५८ कात्तिकमा माओवादीदे रोल्पाको कुरेलीमा सैन्य भेला गरेर औपचारिक रुपमा जनमुक्ति सेनाको गठन ग¥यो । बटालियन स्तरको संरचना बनायो । त्यो बटालियनको कमाण्डर पासाङ हुनुभयो ।
०५९ मा माओवादीले जनमुक्ति सेनाको व्रिगेड संरचना बनायो, कमाण्डर उहाँ हुनुभयो । त्यसपछि बनेको दुईवटा डिभिजनमा उहाँका पश्चिम डिभिजनको कमाण्डर हुनुभयो । पूर्वी डिभिजन कमाण्डर वर्षमान पुन हुनु भयो । लगतै माओवादीले तीनवटा डिजिभन बनायो । पासाङ मध्य, अनन्त पूर्व र जनार्दन शर्मा प्रभाकर पश्चिम डिभिजनको कमाण्डर हुनुभयो । ०६२ मा भएको बहुचर्चित चुनबाङ बैठकपछि माओवादीले सातवटा डिभिजन बनायो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड सुप्रिम कमाण्डर तथा अनन्त, पासाङ, प्रभाकर र चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव डेपुटि कमाण्डर हुनुभयो । शान्तिप्रक्रियापछि प्रचण्डले सुप्रिम कमाण्डर छाडेपछि जनमुक्ति सेनाको प्रमुख पासाङ हुनुभयो । उहाँ माओवादीले सैन्य संरचना बनाएको सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रमुख कमाण्डर हुनुभयो ।
प्रमख सैन्य कारबाहीहरु :-
पासाङ आफ्नो नेतृत्वमा आक्रमण गर्ने हो भने सबै योजना आफै बनाउनुहुन्थ्यो । परिपक्व तयारी गर्ने र हिम्मतका साथ लडाईंको नेतृत्व गर्ने कुशल नेतृत्व शैलीको अझै धेरैले प्रशंशा गर्छन् । उहाँको नेतृत्वमा भएको कुनै पनि लडाईं माओवादीले हारेन ।
०५२ फागुन १ गते होलेरी आक्रमणमा सह–कमाण्डरबाट सुरु भएको लडाईं त्यसपछि भने प्रमुख कमाण्डर भएर लड्नुभयो । पश्चिम नेपालमा माओवादीले गरेको ठूलठूला लडाईं सबै उहाँकै नेतृत्व, रक्की र योजनामा भएका छन्, जुन लडाईं माओवादीले अनिवार्य जितेको छ । प्रहरीमाथि भएको रोल्पाको होलेरी (दोस्रो, जेलबाङ, घर्तिगाउँ, सल्यानको झिम्पे, जाजरकोटको लाहाँ, पाँचकटिया, रुकुमको महत, तकसेरा, रुकुमकोट उहाँकै नेतृत्वमा भएका हुन् ।
शान्तिप्रक्रियाको नायक :-
राष्ट्रभक्त नेता पासाङ :-
दक्ष प्राविधिज्ञ :-
पुस्तक र साहित्य :-
मृत्यु नजिक :-
२४ वैशाख ०६९ मा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाले रोल्पाको गाममा रहेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको व्यारेकमाथि हमला ग¥यो । आक्रमणका कमाण्डर पासाङ सहयोगीसहित व्यारेकतर्फ बढ्दै गर्दा प्लाटुन कमाण्डर धर्मेन्द्रले उहाँलाई रोकेर आफु अगाडि बढ्नुभयो । आर्मीको गोली धर्मेन्द्रलाई लाग्यो । र, उहाँको सहादत भयो । धर्मेन्द्रले पासाङलाई रोकेर अगाडि नबढेको भए त्यो गोली पासाङलाई लाग्नेवाला थियो ।
आफ्नै मृत्युको खबर :-
कुनै सुविधाको पद नलिनुभएका :-
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको झण्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पासाङले कुनै पनि सुविधाको पद लिनुभएको छैन । उहाँका धेरै सहपाठीहरु कोही मन्त्री कोशी संसद सदस्य र कोहीले राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका छन् । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुनुभयो ।
भूकम्पपछि उद्धारमा सक्रिय :-